Gufgaf|Online किन गरे प्रदिप खड्काले दि ब्रेकअपको ट्रेलर आफ्नो फेसबुकमा शेयर ?
किन गरे प्रदिप खड्काले दि ब्रेकअपको ट्रेलर आफ्नो फेसबुकमा शेयर ?
गफगाफ - नेपाली चलचित्र बजारका नायक तथा नायिकाहरुलाई आफैले अभिनय गरेको चलचित्र प्रमोशनका निम्ति समय हुदैन । यसै कारण धेरै जसो नायक नायिका र निर्माता निर्देशक बिच मनमुटाव पनि हुने गरेको छ । यही अवस्थामा एक अभिनेताले अन्य अभिनेताले अभिनय गरेको चलचित्रको प्रमोशनमा समय खर्चिन सक्लान ?
तर, अभिनेता प्रदिप खड्काले भने चलचित्र दि ब्रेकअपको ट्रेलर आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरेका छन् र चलचित्रको प्रशंसा समेत गरेका छन् । उनले चलचित्रको ट्रेलरको प्रशंसा गर्दै विदेशी चलचित्रलाई नेपाली चलचित्रले पछि पार्न हटाउन सक्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । अभिनेता प्रदिप खड्काले दि ब्रेकअपको ट्रेलर यसरी शेयर गरेर उदाहरणिय काम गरेको र यसता कामले चलचित्र नगरीमा सहयोगी भावना मौलाएर जान सक्ने धेरैको तर्क छ ।
तर कति चलचित्र पण्डितहरुले भने प्रदिपले निर्देशक बिसी सँग नजिक हुनका लागि ट्रेलर शेयर गरेका हुन् भन्ने गरेका छन् । अभिनेता प्रदिप खड्का र अनमोल केसीलाई धेरैले एक अर्काको प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेर्ने गरेका छन् । अनमोल अभिनित चलचित्र क्याप्टेन पनि सोहि दिनबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । उनले दि ब्रेकअपको प्रचार गर्नुको पछाडि अनमोल पनि हुन सक्ने बताइन्छ । अभिनेता प्रदिप हेमराज वीसीको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रमा काम गर्ने तयारीमा छन् ।